Horudhac: Sheffield United vs Manchester City… (Garoonka Bramall Lane oo galabta marti gelinaya kulan muhiim u ah labada kooxood) – Gool FM
(Sheffield) 31 Okt 2020. Garoonka Bramall Lane ayaa marti gelinaya kulanka ugu horreeya horyaalka Premier League maanta oo Sabti ah, iyadoo kooxda Sheffield United ay soo dhoweynayso naadiga Manchester City, kulan muhiim u ah labada kooxood.
The Blades ayaa kaliya heshay hal dhibic lixdeedii kulan ee ay ciyaartay xilli ciyaareedkan, waxaana ay fadhiyaan kaalinta 19-aad ee kala sarreynta horyaalka Premier League, halka Man City ay ku jirto kaalinta 13-aad ee kala horreynta horyaalka kaddib markii ay heleen siddeed dhibcood, shantoodii kulan oo ay ciyaareen ee furintaanka horyaalka kal ciyaareedkan 2020-21.
Daafaca buuxa ee Sheffield United, Max Lowe ayaa diyaar u ah inuu wajaho Manchester City kaddib markii uu dhammaystay karaantiil jahwareer ah.
Diidmada John Lundstram ee ah inuu ogolaado qandaraas cusub ayaan la filaynin inuu saameyn ku yeesho ka qeyb qaadashadiisa kulankan.
Nathan Ake iyo Gabriel Jesus ayaa taam u noqon kara dib ugu soo laabashada City, halka Aymeric Laporte laga fiirsanay doono kaliya inuu ciyaaro kulankiisii labaad ee horyaalka xilli ciyaareedkan.
Tababare Pep Guardiola ayaa weli heli doonin adeegga Sergio Aguero, Fernandinho iyo Benjamin Mendy.
>- Sheffield United waligeed kama badin Manchester City kulan Premier League ah siddeed jeer oo isku day ah, waana tii ugu badneyd ee ay wajahaan koox kasta oo ka mid ah heerkan iyadoo aan guuleysan, waxaana ay kala kulmeen saddex barbaro iyo shan guuldarro, goolkooda kaliya ee kulamadaas waxaa u dhaliyay Brian Deane bishii April ee sanadkii 1993-kii.
>- Manchester City ayaa u tartameysa inay guuleysato afar kulan oo isku xiga oo horyaalka ah oo ay la ciyaarto Sheffield United markii ugu horreysay tan iyo bishii Maarso sanadkii 1930-kii.
>- The Blades ayaa guul la’aan ah lix kulan oo horyaalka ah tan iyo guushii 1-0 ee ay ka gaareen heerka labaad bishii Janaayo ee sanadkii 2000.
>- The Blades ayaa ku guuldareysan kara inay guuleystaan mid ka mid ah toddobadii kulan ee ugu horreysay ee xilli ciyaareedka markii ugu horreysay tan iyo sanadkii 1991-kii.
>- Sheffield United ayaa barbareysay rikoorkeedii ugu xumaa ee hal dhibic inay hesho kaddib lix kulan oo horyaalka ah ee ay ciyaartay xilli ciyaareedka, markii ugu horreysay oo ay sidaas sameysanaya waxa ay ahayd xilli ciyaareedkii 1975-76, waxayna guuldarreysteen kulankoodii toddobaad ee horyaalka xilligaasi.
>- Waxay hal dhibic ka heleen sagaalkii kulan ee ugu dambeysay Premier League tan iyo markii ay garaaceen Chelsea bishii July.
>- The Blades ayaa barbareyn karta rikoorka kooxda ee Premier League oo ah inaysan guul ku gaarin garoonkeeda shan kulan oo xiriir ah, kaasoo la dhigay sanadkii 1993-kii, isla markaana la barbareeyey sanadkii 1994-kii.
>- Tababare Chris Wilder ayaa badiyay 99 ka mid ah 202 kulan oo uu kooxda hoggaamiyay tartammada oo dhan.
>- Wadarta Man City ee siddeed dhibcood waa dhibcihii ugu hooseeyay heerkaan xilli ciyaareedka tan iyo fasal ciyaareedkii 2014-15.
>- Waa bilowgii ugu xumaa ee Pep Guardiola tababare ahaan shan kulan oo horyaalka ah hal xilli ciyaareed oo dhibcaha ugu yar ee ay kooxdiisu heshay kaddib lix kulan oo horyaalka ah oo ay fadhiso kaalinta 13-aad.
>- Manchester City ayaa laga dhaliyey goolal badan oo ah siddeed gool horyaalka kaddib shan kulan oo ay ciyaartay markii ugu horreysay tan iyo xilli ciyaareedkii 2006-07.
>- Waxay ku guuldarreysan karaan inay dhaliyaan wax ka badan hal jeer afar kulan oo isku xiga Premier League markii ugu horreysay iyadoo ka hoos ciyaaraya tababare Pep Guardiola.
>- Tan iyo bilowgii xilli ciyaareedkii hore, Man City wax guul ah ma gaarin dhammaan toddobadii kulan ee Premier League oo ay marti ahaayeen markii laga dhaliyay goolkii furitaanka, waxaana ay la kulmeen 1 barbaro iyo 6 guuldarro.
>- Riyad Mahrez ayaa gacan ka geystay 99 gool 203 kulan oo uu Premier League ka soo muuqday, waxa uu dhaliyey 58 gool isagoo caawiye ka noqday 41 gool oo kale.
>- Kyle Walker, kaasoo xirfaddiisa ciyaareed ka soo bilaabay Sheffield United ayaa hal kulan u jira inuu 100 kulan oo Premier League ah u safto Kooxda Manchester City.